सेनाकाे भैरवनाथ गणमा १७ वर्षअघि हराएकाे छाेरा खाेजिरहेका बुढा बा
१७ वर्ष भयो, कृष्णप्रसाद ढकाल छोराको खोजीमा सिंहदरबार धाउन थालेको । तर, अब उनलाई सिहंदरबारका मन्त्री र मन्त्रालयमा विश्वास छैन । त्यसैले उनी अचेल सिंहदरबार परिसरमा भेटिने मान्छेलाई छोरा नभेटिएको व्यथा सुनाउँछन् । छोरा हराएको कथा सुनाउँछन् । एकछिन भए पनि मन हलुको बनाउने प्रयास गर्छन् ।
उनीसँग अब छोराको स्मृति मात्र छ, सिहंदरबारका कोठा, चोटा र मन्त्रीका क्याबिन धाउँदा–धाउँदै स्मृति पनि धुमिल भइसक्यो । बुढ्यौलीले सम्झनाका रेखा मेट्न थालिसक्यो ।
२०६० साल देशमा तत्कालिन माओवादी र सरकारबिच सशस्त्र संघर्ष चर्किएको समय थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको तत्कालिन पाँचपोखरी गाउँविकास समिति (हालको चौंरीदेउराली गाउँपालिका) मा पनि सशस्त्र संघर्षका बाछिटा पुग्थे । लक्का जवानहरु सत्ता पक्ष र विद्रोही दुवै पक्षबाट असुरक्षित महसुस गर्थे । गाउँमा भन्दा राजधानीमा छोरा सुरक्षित हुन्छ ठाने कृष्णप्रसादले । गाउँबाटै एसएलसी पास गरेपछि छोरा चन्द्रकुमार ढकाललाई पढ्न काठमाडौं पठाए ।
‘गाउँमा त्यतिखेर सरकार माओवादी दुवैको डर थियो,’ सिहंदरबार गृह मन्त्रालयको गेट अगाडि उभिएका कृष्णप्रसाद सुनाउँछन्, ‘यता (काठमाडौं) भयो भने पढ्छ, सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर पठाएको,’ बोल्दा बोल्दै रोकिन्छन कृष्णप्रसाद ।
सिंहदरबारमा भेटिने हरेक मान्छेलाई कृष्णप्रसादले यही कथा सुनाउन थालेको वर्षौ भइसक्यो । उनलाई अब कथा सुनाउन इच्छा छैन, जाँगर छैन । तर, पनि उनी आफ्नो व्यथा सुनाउन बाध्य छन् ।
कृष्णप्रसादका छोरा सरस्वती क्याम्पसमा पढ्थे । २६ कार्तिक २०६० उनी एकाएक हराए । छोरा हराएको हप्ता दिनपछि गाउँमा खबर पुग्यो । कृष्णप्रसाद अताल्लिदै काठमाडौं आए । छोरा पढ्ने कलेज, बस्ने कोठा सबैतिर बुझे । पुलिसमा खबर गरे । तर, कतै केही पत्ता लागेन ।
एकदिन उनलाई कसैले सुनायो, ‘नेपाली सेनाको भैरवनाथ गणले पक्राउ गरेको छ ।’ १२ फागुन २०७६ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग भैरवनाथ गणमा निरीक्षणका लागि गएको थियो । निरीक्षणमा के कुरा पत्ता लाग्यो आयोगले अझै सार्वजनिक गरेको छैन ।
सोधपुछका लागि पक्राउ गरेको भने पनि आजसम्म उनका छोराको अत्तोपत्तो छैन् । ‘१७ वर्षसम्म नसकिने यो कस्तो सोधपुछ हो ?’ उनी पुन्पुरो समाउँछन् । छोरालाई पढाउन भनेर कृषि विकास बैंक बनेपा शाखाबाट ऋण समेत लिएका थिए उनले ।
पढाईलेखाई गरेर छोराले ऋण तिर्ला, बुढेसकालको सहारा होला भन्ने आश थियो । ‘त्यही ऋणले खेतबारी गुम्यो,’ उनी सुनाउँछन । ऋण मिनाहाका लागि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन हाले । तर, सुनुवाई भएन् ।
१७ वर्षदेखि सिहंदरबार धाइरहेका कृष्णप्रसाद ७७ वर्ष पुगिसके । कहिलेकाहीं उनलाई चिन्ता लाग्छ, ‘कतै, छोराको पत्तो नपाएरै यो जुनी बित्ने हो कि ?’ चिन्ताले गलाए पनि उनले हिम्मत हारिसकेका छैनन्, ‘छोराको खोज खबर नगरी त के मर्थे र ?’
माओवादीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको समय २०५२ सालदेखि शान्ति सम्झौता हुँदाको समय २०६३ सम्म बेपत्ता भएका नागकिको खोजबिन र छानविनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको छ ।
२०७१ सालमा गठन भएको यो आयोगमा अहिलेसम्म २ हजार ५ सय ६ जना बेपत्ता भएको उजुरी परेको छ । ‘आयोग बनाएको छ, ३ महिनामा सबै पत्ता लाग्छ भन्छन्् खै यतिका वर्ष भईसक्यो केही अत्तोपत्तो छैन,’ उनी आक्रोशित हुन्छन् । खासमा उनीसँग अब आक्रोशित हुने तागत पनि छैन् । बस् उनको एउटै माग छ, ‘कि सास देखाउनुपरो, कि लाश !’
‘को सँग रिसाउनु ? को सँग खुसाउनु ? कति जनाको अगाडी आँसु बगाउनु ?’ गृह मन्त्रालयको गेट छेउमा थुचुक्क बस्दै उनी भन्छन्, ‘अब त आँशु पनि सुक्यो, बाबु !’
उनी महिनैपिच्छे सिहंदरबार धाउँछन् । कहिले आफन्तलाई भनेर, त कहिले बेपत्ता परिवारको परिचयपत्र देखाएर सिहंदरबार छिर्छन् । सिहंदरबार छिरेपछि उनी गाउँमा रहेकी श्रीमतीलाई फोन गर्छन र भन्छन्, ‘चाँडै पत्ता लाग्छ रे, सरकारले काम गर्दैछ ।’
श्रीमतीलाई फोनमा झुटो बोलेपछि उनी एकतमासले सिहंदरबारका सडकमा भौँतारिन्छन् । श्रीमतीको चित्त बुझाउनकै लागि भए पनि उनी सिहंदरबार धाउँछन् । ‘हरेक साँझ जहानले छोरालाई पनि खाना पस्किन्छे,’ उनको गला अबरुद्ध हुन्छ, ‘सहनै सक्दिन अनि काठमाडौं आउँछु ।’
छोराको सदगत पनि गरेका छैनन उनले । ‘जिउँदो छ भन्ने पनि प्रमाण छैन, मरेको पनि प्रमाण छैन, कसरी सद्गत गर्नु ?’ उनी सोध्छन । जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका कृष्णप्रसादले आजसम्म भेट्न बाँकी सायदै मन्त्री छन् होलान् । कसैले पनि उनको माग पुरा गर्दिन भनेर भनेनन् । तर, पूरा पनि कसैले गरेनन् । उनको माग थियो, ‘छोरा जिउँदो छ कि मर्‍यो बताइदिनुहोस् ।’
कृष्णप्रसादले सिंहदरबारको आँगन धाउँदा, धाउँदै निराशा र अन्यौलका १७ वर्ष बिताइसके । ‘सन्तानको माया यसै त कसरी छाड्न सकिन्छ र ?’ छोराको माया नै उनको बृद्धावस्थाको ऊर्जा बनेको छ ।
मनमा ऊर्जा भएपनि शरीरले भने बुढ्यौलीका लक्षण देखाइसक्यो । त्यसैले त उनी सिंहदरबारमा भेटिने जो कोहीलाई आफ्नो व्यथा सुनाउँछन् । किनभने, ‘कसैगरी छोरा पत्ता नलगाई म थला परे भने ? म मरे भने ? यो जुगले थाहा पाइराखोस् छोरा खोज्दा खोज्दै एउटा बाउ मरेको थियो भनेर ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, ०८:४३:००